Sidee loo noqdaa qof fur furan? | Raganimo University
Sidee loo noqdaa qof fur furan?
September 3, 20203 minutes
Horta ugu horeyn waxaa muhiim ah in aan isla fahano waxa fur furnaantu ay tahay iyo calaamadaha qofka furfuran. Waxaan ku tilmaami karnaa in uu yahay qof ay fududahay in ay dadka kale la hadlaan oo bulshada ku dhex jira. Qof ay u fududahay in uu asxaab samaysto. Ama uu xiriir yeesho. Qof aan hore ka caroon.
Talada halkaan aan kuugu soo jeedin doono waxaan rajeyneynaa in ay kaa caawin doonto in aad noqoto qof fur furan oo faraxsan.
1. Dhoolo cadeynta badso
Calaamadaha dadka furfuran waxaa ugu muhiimsan dhoolo cadeynta. Qofku marka uu dhoolo cadeynayo ayaa lagu dhiiran karaa in lala hadlo. Dabeecad ka dhigo dhoolo cadeynta. Ha soconin, meel ha fariisanin adiga oo u muuqda qof xanaaqsan. Marka aad qof cusub la hadlayso waa in aad dhoolo cadeysaa.
2. Ku dhiiro sameynta waxyaabo cusub
Qofkasta waxa uu leeyahay goobo uu markasta tago, asxaab uu ku dhowyahay iyo waxyaabo uu joogto u sameeyo. Taasoo keenaysa in uusan ku dhiirin in uu wajaho xaalado cusub ama in uu barto dad cusub. Isku day in aad isbuuc kasta tijaabiso xaalado cusub. Ama aad barato dad cusub. Isku day in aad tagto meelo cusub oo aadan horey u tagi jirin ama in aad qabato hawlo cusub oo aadan horey u sameyn jirin. Tusaale, haddii aad kubada ciyaarto isku day in aad tijaabiso poolka.
3. Su'aalo waydiinta badso
Dadka furfuran waxaa lagu yaqaanaa in ay yihiin kuwo su'aalo badan oo doonaya markasta in ay wax cusub bartaan. Qofka dadka su'aalaha waydiiya waa mid ku fiican in lala sheekaysto. Waayo taasi waxay u muujineysaa qofka kale in aad xiiso u qabto in aad noloshiisa wax ka barato.
4. Iska ilaali fikrad ku dhaga
Dad badan ayaa iska aaminsan fikrado aysan xaqiijin ama aysan aqoon iyo waayo-aragnimo u lahayn. Haddii aadan wax aqoon dhibaato ma ahan in aad qof waydiiso, ama aad internetka ka barato macluumaad dheeri ah. Waxaas ma aqaan ceeb ma ahan. Dadka furfuran waa kuwo markasta doonaya aqoon cusub oo aan fikrad isaga dhegin iyaga oo aan aqoonteeda ama waayo aragnimada helin.
5. Ha xukmin dadka
Haddii aad dooneyso in aad noqoto qof furfuran oo lala sheekaysan karo waa in aadan aragtida iyo nolosha dadka kale hore ka xukmin. Haddii qof kugu yiraahdo arin aad la yaabto ama aadan ku fikir ahayn isku day in aad fahanto sababta ka dambeysa fikirkooda ama sababta ay u sameeyaan arintaas. Isku day in aad qofka kabahiisa gashato oo aad booskiisa gasho. Marka aadan dadka hore ka xukmin waxaa siyaadiya in lagu aamino.
6. Dhagayste fiican noqo
Fur furnaantu hadal keliya ma ahan ee dhageysigu qeyb weyn ayuu ka yahay. Isku day marka aad qof la sheekeysanayso in aad noqoto dhageyste fiican. Dhageystaha fiican waa mid qofka dhageysta isla markaana muujiya in uu la socdo hadalka oo fahmay hadalka loo sheegayo. Waa mid ka su'aal celiya arintii uusan si fiican u fahmin ama xiiso gaar ah ku haysa.